lc_admin – Life and Challenge
3D Myanmar သည် မြန်မာနိုင်ငံ 3D Technology နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း တွင် 3D Technology နည်းပညာများဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်နေပါသည်။ ၈.၃.၂၀၁၇ နေ့တွင် မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ သုတေသနဌာန (ပြင်ဦးလွင်) မှ ဝယ်ယူထားသော MakerBot Z18 3D Printer သုံးစွဲပုံနည်းပညာ များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေး သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။
Forever Group မှ ရုပ်သံမီဒီယာများတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ 3D Animation များ Visual Effect များ 3D Model များလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ဖန်တီးအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Life and Challenge Co., Ltd. မှ တင်သွင်းရောင်းချနေသော Artec Space Spider ကို Forever Group 3D Department မှ ဝယ်ယူခဲ့ပါသည်။
၁၆.၂.၂၀၁၇ နေ့တွင် 3D Myanmar Training Team မှ Forever Group သို့ သွားရောက်၍ Artec Space Spider သုံးစွဲပုံ နည်းပညာများကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေး သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။
International Technology and Industry Show 2017 ကို တပ်မတော်ခန်းမတွင် ၂၇.၁.၂၀၁၇ မှ ၂၉.၁.၂၀၁၇ ထိ ကျင်းပရာ 3D Myanmar မှ Booth No.A23, A24 တွင် ပြည်တွင်းရှိ နည်းပ ညာကိုစိတ်ဝင်စားသူများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်
Laminated Object Manufacturing (LOM) သုံးနည်းပညာမြင့် 3D Printer များနှင့် အရည်အသွေးမြင့် Artec 3d Scanner ကိုဝင် ရောက်ပြသခဲ့ရာ လူအများ စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်လေ့လာ ခဲ့ကြပါသည်။
၁၀.၁၁.၂၀၁၆ (ကြာသပတေးနေ့) တွင်Sky Star Hotel ရှိ Royal BallRoom ခန်းမတွင် Nyomo Co., Ltd (Hong Kong) နှင့် 3D Myanmar တို့ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတကာတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ပန်ထိမ်လုပ်ငန်းသုံး 3D Printer များနှင့်3D နည်းပညာများကို လက်တွေ့သရုပ်ပြရှင်းလင်း၍ Nyomo Products များကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပြပွဲသို့လာရောက်သောဧည့်သည်တော်များလည်း စိတ်ပါဝင်စားစွာ တက်ရောက် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါသည်။
“ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သိနေတတ်နေယုံနဲ့တော့ ပန်းထိမ်လောကကို အကျိုးမပြုနိုင်ပါ ဘူး ကိုယ်သိတာတွေ မျှဝေပါ ၊ ပူးပေါင်းပါ ၊ စည်းလုံးပါ ၊အစုအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်ပါ မြန်မာလူမျိုးတွေ မညံ့ပါဘူး ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်မှု မရှိသေးလို့ ပါ” ဟု ပြပွဲလာ ဧည့်သည်တော်တစ်ဦးမှ အမှတ်တရ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Sep 26, 2016 lc_adminLife&Challenge
3D printing technology is all starts to makingavirtual design of the object you want to create and also 3D scanners use different technologies to generatea3D model.
Life and Challenge Co. Ltd isaprovider of engineering products, teaching aids and High end research technologies to Colleges, Universities and Government factories. Life and Challenge Co. Ltd came up asatrusted partner in this field and established solid relationships with vendors and end users providing best solutions and services.
Life and Challenge Co., Ltd. pride ourselves on our quick, high-quality 3D printing service. All we need is your requirement and within few hour, we will be able to provide you witha3D printing, scanning and designing quote.
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းရုံးဥက္ကဌ ဦးလူမင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၁၈.၈.၂၀၁၆ မှ ၁၉.၈.၂၀၁၆ ထိ Park Royal ဟိုတယ်တွင် ကျင်းပသော မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဖိုရမ်တွင် နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်လောကတွင် လူကြိုက်များအသုံးများနေသော 3D Scanner များ 3D Printer များကို 3D Myanmar မှ ဝင်ရောက်ပြသခဲ့ပါသည်။
အနုပညာ ရုပ်ရှင်လောကသားများ တစ်ခဲနက် စိတ်ပါဝင်စားစွာ လာရောက်အားပေးကြသော